သငျကံဆိုးနတေယျလို့ထငျလား..ဒီပုံပွငျလေးကိုဖတျကွညျ့ပါ – Askstyle
ကံဆိုးဖို့ ဖွဈလာတာလား၊ ကံကောငျးဖို့ ဖွဈလာတာလား၊ ဘယျသူက သိနိုငျမှာလဲဆိုတဲ့ “တရုတျလယျသမား ပုံပွငျ”
လယျသမားအိုကွီးတဈယောကျမှာ သူ့လယျကို ထှနျယကျပေးဖို့ မွငျးအိုကွီးတဈကောငျရှိပါတယျ..။ တဈနမှေ့ာ သူ့မွငျးကွီးဟာ တောငျတနျးတှရှေိတဲ့ဘကျဆီကို ထှကျပွေး သှားပါလရေော..။ အဲဒီ့တော့ လယျသမားကွီးရဲ့ အိမျနီးခငျြးတှကေ လယျသမားကွီး ကံဆိုးလိုကျတာဆိုပွီး သနားနကွေသတဲ့..။ လယျသမားကွီးက “ကံဆိုးတာလား? ကံကောငျးတာလား? ဘယျသူကသိမှာလဲ?” လို့ပွောသတဲ့..။
တဈပတျလောကျလဲကွာရော မွငျးအိုကွီးဟာ တခွားမွငျးရိုငျးအုပျကွီးကို ချေါလာပွီး ပွနျရောကျလာသတဲ့..။ အဲဒီ့အခြိနျလဲကရြော အိမျနီးခငျြးတှကေ လယျသမားကွီးရဲ့ ကံကောငျးမှုကို ခြီးကြူးဂုဏျပွုကွပွနျတယျ..။ လယျသမားကွီးကတော့ “ကံဆိုးတာလား? ကံကောငျးတာလား? ဘယျသူကသိမှာလဲ?” လို့ပဲ ပွောသတဲ့..။
ရကျနဲနဲလညျးကွာလရေော..။ လယျသမားကွီးရဲ့သားဟာ မွငျးရိုငျးတှကေို ယဉျပါးအောငျ လုပျရငျးနဲ့ တဈကောငျကို တကျအစီးမှာ ပွုတျကပြွီး ခွထေောကျသှငျသှငျ ကြိုးသှားပါလရေော..။ အားလုံးကတော့ ကံဆိုးလိုကျလခွေငျးဆိုပွီး တှေးသတဲ့..။ လယျသမားကွီးကတော့ သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုငျးပါပဲ.. “ကံဆိုးတာလား? ကံကောငျးတာလား? ဘယျသူကသိမှာလဲ?” တဲ့..။
ရကျသတ်တပတျ အနညျးငယျအကွာမှာ.. စဈတပျတဈခုဟာ အဲဒီ့ရှာလေးဆီကို ခြီတကျလာလသေတဲ့..။ ကနျြးမာသနျစှမျးတဲ့ လူငယျယောကျြားလေးမှနျသမြှ စဈမှုမထမျးမနရေစနဈကွောငျ့ ဒီရှာမှာ စဈသားသဈတှေ လာရှာကွတာတဲ့..။ အဲဒီ့အခြိနျမှာ လယျသမားကွီးရဲ့သားဟာ ခွထေောကျကြိုးနတေဲ့အတှကျ ကငျးလှတျခှငျ့ရသှားခဲ့တယျ..။
ဒါကွောငျ့ အကွောငျးတဈစုံတဈရာ ဖွဈပျေါလာခွငျးဟာ “ကံဆိုးဖို့ ဖွဈလာတာလား? ကံကောငျးဖို့ ဖွဈလာတာလား? ဘယျသူကသိနိုငျမှာလဲ?”
Ref – The Chinese farmer
ကံဆိုးဖို့ ဖြစ်လာတာလား၊ ကံကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာလား၊ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ “တရုတ်လယ်သမား ပုံပြင်”
လယ်သမားအိုကြီးတစ်ယောက်မှာ သူ့လယ်ကို ထွန်ယက်ပေးဖို့ မြင်းအိုကြီးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်..။ တစ်နေ့မှာ သူ့မြင်းကြီးဟာ တောင်တန်းတွေရှိတဲ့ဘက်ဆီကို ထွက်ပြေး သွားပါလေရော..။ အဲဒီ့တော့ လယ်သမားကြီးရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေက လယ်သမားကြီး ကံဆိုးလိုက်တာဆိုပြီး သနားနေကြသတဲ့..။ လယ်သမားကြီးက “ကံဆိုးတာလား? ကံကောင်းတာလား? ဘယ်သူကသိမှာလဲ?” လို့ပြောသတဲ့..။
တစ်ပတ်လောက်လဲကြာရော မြင်းအိုကြီးဟာ တခြားမြင်းရိုင်းအုပ်ကြီးကို ခေါ်လာပြီး ပြန်ရောက်လာသတဲ့..။ အဲဒီ့အချိန်လဲကျရော အိမ်နီးချင်းတွေက လယ်သမားကြီးရဲ့ ကံကောင်းမှုကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြပြန်တယ်..။ လယ်သမားကြီးကတော့ “ကံဆိုးတာလား? ကံကောင်းတာလား? ဘယ်သူကသိမှာလဲ?” လို့ပဲ ပြောသတဲ့..။
ရက်နဲနဲလည်းကြာလေရော..။ လယ်သမားကြီးရဲ့သားဟာ မြင်းရိုင်းတွေကို ယဉ်ပါးအောင် လုပ်ရင်းနဲ့ တစ်ကောင်ကို တက်အစီးမှာ ပြုတ်ကျပြီး ခြေထောက်သွင်သွင် ကျိုးသွားပါလေရော..။ အားလုံးကတော့ ကံဆိုးလိုက်လေခြင်းဆိုပြီး တွေးသတဲ့..။ လယ်သမားကြီးကတော့ သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ.. “ကံဆိုးတာလား? ကံကောင်းတာလား? ဘယ်သူကသိမှာလဲ?” တဲ့..။
ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အကြာမှာ.. စစ်တပ်တစ်ခုဟာ အဲဒီ့ရွာလေးဆီကို ချီတက်လာလေသတဲ့..။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ လူငယ်ယောက်ျားလေးမှန်သမျှ စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကြောင့် ဒီရွာမှာ စစ်သားသစ်တွေ လာရှာကြတာတဲ့..။ အဲဒီ့အချိန်မှာ လယ်သမားကြီးရဲ့သားဟာ ခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့အတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်..။
ဒါကြောင့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာ “ကံဆိုးဖို့ ဖြစ်လာတာလား? ကံကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာလား? ဘယ်သူကသိနိုင်မှာလဲ?”